Jesoa Zanak’Andriamanitra : Mofon’ny fiainana, vatsin’ankohonana
Malala il y a 11 mois
« Trinite Masina: Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina: Fianakaviana miaina am-pitiavana lavorary »
Satria manano-sarotra ny fanaparitahana ny gazety Lakroa (Lakroan’i Madagasikara) dia eto amin’ny tranonkala no hamoahana ireo lahatsoratra tokony ho novakianao tao amin’ny laharana mivoaka ny alahady 7 jona izao, laharana 4183
« Ny Fanahy Masina: mampifankahazo sy mampihavana »
Niandrandra ny lanitra i Jesoa ary nivavaka
Mbola mitohy hatrany ny hamehana ara-pahasalamana ka tsy afaka mizara ny gazety Lakroan’i Mdagasikra manerana ny Nosy isika. Manoloana izany dia notapahana ny hevitra fa atsahatra aloha ny famoahana ny gazety taratasy ary dia eto amin’ny internet no havoaka ireo lahatsoratra tokony havoaka ao amin’ny gazety Lakroan’i Madagasikara
« Ny Fanahy Masina no manohy ny asani Kristy »
Mbola mitohy hatrany ny hamehana ara-pahasalamana ka tsy afaka mizara ny gazety Lakroan’i Mdagasikra manerana ny Nosy isika. Manoloana izany dia notapahana ny hevitra fa atsahatra aloha ny famoahana ny gazety taratasy ary dia eto amin’ny internet no havoaka ireo lahatsoratra tokony havoaka ao amin’ny gazety Lakroan’i Madagasikara.
Homélie 17 mai 2020
Manoloana ny fahafatesan’ny renin’i mompera Malala dia ny toritenin’i Mompera Jacques Fournier no arosontsika eto hanampy antsika amin’ny fanomanana ny vakiteny ny alahady 17 mey 2020. Ny ekipan’ny Lakroan’i Madagasikara sy www.lakroa.mg dia mamangy amin’ny fahoriana an’i Mompera ary mankahery azy. Mitondra ambavaka ho an’ny fialantsasatry ny fanahin’ny reniny sy hirotsaka ao amin’i Mompera hatrany ny herin’ny Fanahy Masina amin’ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly nofinidy. Misaotra antsika mitondra ambavaka azy sy ho fialantsasatry ny fanahin’ny reniny. Malala no manoratra an’ireny lahatsoratra ho fitaovana hanomanantsika ny famakiana ny Evanjely aroso eto hatramin’ny nisian’ny fihobohana ary izy dia mompera.